June 2021 - ခေတ်သစ်နတ်ခ်
နွေဦးတော်လှန်ရေး ၅ လနီးပါး ဖြစ်လာတဲ့အခါ နှစ်ဖက်စလုံးရဲ့ တိုက်ပွဲဗျူဟာတွေ ပြောင်းလဲလာတာ သိသိသာသာ မြင်တွေ့နေရပါတယ်။ အစပိုင်းမှာ စစ်အာဏာရှင်တွေဟာ ကြမ်းကြမ်းရမ်းရမ်း နှိမ်နင်းသတ်ဖြတ်ရင် ပြည်သူတွေ ကြောက်လန့်ပြီး အရှုံးပေးသွားလိမ့်မယ်လို့ လျှော့တွက်ခဲ့ကြပုံရပါတယ်။ မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ အင်တာဗျူးမှာ ပြည်သူတွေ ခုလောက်အထိ ဆန့်ကျင်အာခံလိမ့်မယ်လို့ မထင်မှတ်ခဲ့ကြောင်း ပြောတယ်လေ။ ဒါပေမဲ့ ပြည်သူလူထုက အနိုင်မခံ အရှုံးမပေး
ကိုဆွေဝင်း (အယ်ဒီတာချုပ်) Myanmar Now သတင်းဌာန စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ အာဏာသိမ်းပြီးကတည်းက သတင်းမှား၊ အချက်အလက်မှားမျိုးစုံနဲ့ ပြည်သူတွေကို စိတ်ဓာတ် စစ် ဆင်ရေး လုပ်နေတာပါ။ သမ္မတကို ဖြုတ်ချပြီး ယာယီသမ္မတ ခန့်တာ စစ်တပ်ကို အာဏာလွှဲတာဟာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေနဲ့ မညီတာကို ညီတယ်လို့ လိမ်တယ်။ နိုင်ငံတကာရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့တွေက ရွေးကောက်ပွဲဟာ
ပေ့နဲ့တော့ သိပ်မသက်ဆိုင်ပါဘူး။ဒါပေ့မယ့် စစ်ပွဲဆိုတယ့် ခေါင်းစဥ်အောက်က ထွက်လာတာမို့ observer (or) tacticalသမားတစ်ယောက်အနေနဲ့ရေးပေးသင့်တယ်ထင်လို့ရေးပေးတာပါ။စစ်လက်နက်နဲ့မဆိုင်တာရေးလို့blameချင်လည်းသဘောပါပဲ။ မိုးတွင်းရောက်လာပြီမို့ တောထဲက စစ်ဘေးရှောင်သူတွေအတွက်ပိုခက်ခဲတယ့် ရာသီရောက်လာပါပြီ။စစ်သားအရင့်မာကြီးတွေဖြစ်တယ့် EAOS နဲ့စစ်တပ်တောင်မှ ရာသီဥတုကြောင့်စစ်ချီတက်တာ တတ်နိုင်သလောက်နားပြီးတတ်နိုင်ဆုံးထိုးစစ်တွေရပ်လေ့ရှိပါတယ်။ ရာသီဥတုနဲ့အတူပါလာနိုင်တယ့် စိန်ခေါ်မှုတွေကတော့ (၁)သဲဝဲစားခြင်း မိုးတွင်းမှာစစ်သည်တွေရဲ့ စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုထဲကတစ်ခုပြောပါဆိုရင် သဲဝဲစားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကြာရှည်ရေနဲ့အရေပြားထိတွေ့ပြီး အရေသားပြားဟာ နူးပွလာပြီး သဲဝဲစားခြင်းဖြစ်လာပါတယ်။ အထူးသဖြင့်
အရက်ဆိုင်ထဲမှာ အရက်သောက်နေတဲ့တပည့်က လမ်းမပေါ်ကနေ လမ်းလျှောက်လာတဲ့ဆရာကိုမြင်တော့ နောက်ကနေ လိုက်လာပြီး ပြုံးဖြဲဖြဲနဲ့လာနှုတ်ဆက်တယ်။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထဲဝင်တုန်းက သောက်လက်စ ဆေးလိပ်ကလေးဝှက်ပြီး ဆရာနေကောင်းလား ဘာလား လာနှုတ်ဆက်တဲ့တပည့်မျိုးနဲ့ကြုံဖူးတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ဘောလုံးကွင်းသွားရင် ဆရာဝင်ကန်လို့ရအောင် ခဏထွက်ပေးမယ့် တပည့်မျိုးလည်း ကြုံဖူးတယ်။ ပျက်နေတဲ့ကိုယ့်ဆိုင်ကယ်လေးကို စေတနာပါပါပြင်ပေးပြီး ဆိုင်ကယ်ပြင်ခကို ဘယ်လိုပေးပေးမယူတဲ့အင်္ကျိမှာဆီချေးအထပ်ထပ်နဲ့တပည့်မျိုးနဲ့လည်းကြုံဖူးခဲ့တယ်။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင် သူတို့လေးတွေက ကိုးတန်း ဆယ်တန်းတုန်းက စာမတော်ခဲ့ဘူး။ သူတို့လေးတွေအတွက်
ငါတို့ မင်းတို့ပြောတဲ့ ဒီမိုကရေစီအတိုင်း ငါတို့ စိတ်နဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ တပ်ထဲကိုဝင်ပြီဆိုထဲက တိုင်းပြည်အတွက် အသက်ပေးပြီးသား…ခုလို ဗိုလ်မှူး နေရာရဖို့ ဘယ်လောက်ကြိုးစားခဲ့ကြသလဲ သိသလား? … တပ်ထဲမှာ တိုင်းမှူး နေရာလိုချင်သူတွေ အများကြီး သေသွားတဲ့ တိုင်းမှူးတွေလည်းအများကြီး တိုင်းမှူးတွေက လုပ်ပိုင်ခွင့်အပြည့်ရှိတယ်။ တစ်ယောက်မကောင်း တစ်ယောက်ပြောင်းပဲ အထက်ကခိုင်းတဲ့ အတိုင်းမလုပ်ရင် နေရာရလာမှာမဟုတ်ဘူး။ စစ်သားဆိုတာ ဒီတောင်ကုန်းကို
ဒီည bigo မှာ ဗိုလ်တွေနဲ့ စကားပြောတယ် ကျွန်တော်မဝင်ခင် ဆဲလိုက်တာမှ အမေ့သားသမီးတွေ လီးပဲ စောင့်အဆင့်မရှိဘူး ဒီအိုကြီးအိုမပဲ ပြောနေကြတာဆိုပြီး သောင်းကြမ်းနေပါတယ်။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်ဝင်ဆွေးနွေးတော့တာပဲ။ ငါမဆဲဘူး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဆွေးနွေးကြတာပေါ့ဆိုပြီး။ အတွေးဖလှယ်မယ်ကွာလို့ အခုအချိန် မင်းတို့စိတ်ထဲဘယ်လိုခံစားနေရလဲ? ဖြေ – ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး အရင်အတိုင်းပါတဲ့။ ပြည်သူတွေက မင်းတို့အပေါ်ဘယ်လိုမြင်နိုင်မလဲလို့မေးကြည့်လိုက်တယ်။ ပြည်သူဆိုတာ
ပြည်သူ အတော်များများဟာ မင်းအောင်လှိုင်ကို “အာဏာရူး မင်းအောင်လှိုင်”၊ “မင်းအောင်လှိုင် အာဏာရူး” ဆိုပြီး ပြောဆို ခေါ်ဝေါ်လေ့ရှိကြတယ်။ ပထမတော့ မင်းအောင်လှိုင်ကို အာဏာရူးဆိုပြီး ပြောတာ နည်းနည်းများ များသွားသလားလို့ ထင်ခဲ့ဖူးတယ်။ အခုတော့ အဲဒီ စကားလုံး သူနဲ့ တကယ့်ကိုပဲ ထိုက်တန်တယ် ဆိုတာ နားလည်ခဲ့ရပြီ။ မင်းအောင်လှိုင်က သူတို့တွေဟာ စစ်အာဏာသိမ်းတာ
Gen Z တစ်ယောက်ကမေးတယ် ။ မင်းအောင်လှိုင်တို့အဖွဲ့ ရဲ့ခြေလှမ်းတွေကို ပြောပြပါလားဆရာတဲ့။ ကျွန်တော်တို့ သိထားတော့ ဘာဆက်လုပ်ရမလဲပြင်ဆင်နိုင်တာပေါ့တဲ့။ ဟုတ်ပါပြီငါ့တူတို့ရေ ၊စစ်အုပ်စုက – ၂၀၂၁ တစ်နှစ်လုံး ငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေးကိုအဓိကလုပ်မယ်၊ ဆန္ဒပြပွဲတွေ ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်မှုမှန်သမျှ ကို ရိုက်မယ် ဖမ်းမယ်သတ်မယ် ။နှိပ်စက်မယ်။ အခြေအနေတည်ငြိမ်အေးချမ်းပြီးပြည်သူလူထုကပျော်ရွှင်နေပါပြီ ဆိုတာ ကိုပြမယ်။ ကျောင်းတွေ၊ဘဏ်တွေ၊စျေးတွေအတင့်းပြန်ဖွင့်ခိုင်းမယ်။ – ၂၀၂၁